नाकको छेउमा कोठी हुने व्यक्ति रहस्यमय, अरू ठाँउमा हुने कस्ता ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / नाकको छेउमा कोठी हुने व्यक्ति रहस्यमय, अरू ठाँउमा हुने कस्ता ?
admin December 27, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 85 Views
सबै मानिसको शरीरमा काेठी हुन्छ। शास्त्रका अनुसार काेठि नभएकाे मान्छेले याे संसारमा जन्म लिन सक्दैन् भन्ने मान्यता रहेकाे छ । गोरो अनुहारमा कालो कोठीले थप सुन्दरता निखारेर ल्याउँछ । तर कमैलाइ मात्र थाहा हुन्छ कि कुन अंगमा कोठी हुने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ।
भनिन्छ आँखाको तल कोठी हुनेहरु यस्ता व्यक्ति प्रेममा पागल हुन्छन् र धेरै सहयोगी जनि हुन्छन् ।औँलामा कोठी भएका व्यक्तिहरु कार्यकुशल र न्याय प्रिय हुन्छन् ।चोर औँलामा कोठी हुने व्यक्ति विद्दवान, गुणवान र धनवान हुन्छन् भने यिनिहरुका शत्रुहरु भने धेरै हुन्छन्।
Previous ओमिक्रोनको जोखिम बढेपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यु
Next साथीलाई हा’नेर भागेका शनिले प्रहरीलाइ पनि खु कुरी हा’ने